Caddaalad Ama Caro Eebe: Farriin ku socota Xildhibaanada cusub ee Puntland – Radio Daljir
Janaayo 3, 2019 4:08 g 2
Qof masuul ah in codkiisa adduunyo lagu saameeyo sida lacag, balan qaad xilleed iyo manaafacaad kale wa wax in badan soo jirey kuna reebay bulshooyin badan hormar la’aan haddan waa arrin wali ku danbeysa dalalka soo koraya oo Soomaaliya ka mid tahay. Hadaba, maxay ka dhigantahay in qof masuul ah kubadasho codkiisa manaafacaad noocuu rabo ha ahaadee diiniyan, dadnimo iyo dowlad wanaag marka laga eego? Maqaalkaan waxaan isku dayayaa inaan uga jawaabo su’aashaas kor ku xusan.
Codku wa masuuliyad dusha loo saarey xildhibaanada laguna aaminay inay u gutaan si daacad ah. Codku waa amaano, markhaati-kac iyo garsoorid. In aad codkaaga siiso qof waxay ka dhigantahay waxaan ilahay hortiisa ka qirayaa in qofkaan u codeeynao uu ugu mudanyahay qaadidda masuuliyadda aan udoortey. Eebe wuxu nafarey inaan markhaatiga si xaq ah u gudano oo aanan qarin ama ka been sheegin qofkii qariyana wuxuu inoo sheegey inuu danbaabey. Laga soo bilaabo caaqilka iyo odayaal-dhaqameedka soo xula xildhibaanada ilaa laga gaaro xildhibaanka dooranaya qofka hogaanka u hayn doona dalka, wuxuu Eebe faray in ay u dhiibaan amaanadaas ehelkeeda. Xadiith saxiix ah Nabi Muxamad (S.C.W) waxaa looga soo wariyay inuu yidhi “Dhammaantiin waxaad tihiin masuuliyiin midkastana waxaa laweydiin doona masuuliyaddii loo dhiibey..” Hadaba, qofka ku badashay codkiisa manaafacaad aduunyo amaanadii loo dhiibey ma u dhiibey cidii mudneyd mise wa uu dayacay? Si xaq ah ma uga run sheegey marag-kicii mise wa qariyay? Cadaalad ma u sameeyay dadkii ka xaakim yeeshay mise gabood-fal iyo dulmi buu dusha saartey?
Tusaale, ka warran haddii labo qof oo wax isku haysta kuu timaado adoo maxkamad fadhiya ayna kaa codsadaan inaad u garqaado oo kala xukunto? Meeshii larabay in aad u cadaalad sameyso kawaran haddii aad u eexato kii damiirkaaga ku saameeyay xoogaa aduunyo ah adoo waliba xog-ogaal u ah in kankale ka xaq leeyahay kana huleelay maxkamadii asagoo la dulmeyiyey dareemayana in xaqiisii loo xukumay cidkale? Haddii aad damiirkaga la tashato waad dareemaysa cadaalad xumada aad sameysay maxayse uga duwantahay xildhibaanka ka eexday musharax asagoo tixgalinaya lacagtii musharax hebel damiirkiisa ku iibsadey?
Marka caaqilku ama nabadoonku soo saaro xilddhibaan asagoo ku badalanaya xoogaa xoolo aduunyo ah, xildhibaankiina u codeeyo musharax madaxweyne asagoo ku badalanaya manaafacaad aduunyo madaxweynahaas mid noocee ah buu noqon karaa mana haystaa sharciyad dhab ah oo ku matalo umadda? Taasi waxay horseedaysa dowlad xumo, bulsho aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa sida daryeel caafimaad, biyo nadiif ah, waxbarasho tayo leh iyo guud ahaan nolol wanaagsan.
Hadaba waxaa isweydiin mudan waa maxay waxa ku kallifi kara qof masuul ah inuu damiirkiisa iibiyo?
Waxaan filayaa inay jawaabtu iska fududahay oo ay tahay wuxuu ku tashanayaa in xoolaha yar uu ku badalanayo damiirkisa uu noloshiisa sare ugu qaado. Si kale haddii aan u dhigo, qofkaasi dantiisa gaarka ah buu ka horumariyay danta guud. Markii masuuliyiin badani ay dantooda gaarka ah ka horumariyaan tan guud, ma shaki baa kaaga jira in dantii guud meesha ka baxayso dadkeenuna dayac iyo daryeel xumo la il-darnaan doonaan?
Intaa marka laga soo tago, waa qofkee qofka ay habboontahay in loo doorto hoggaaminta hay’adaha kala duwan ee dowladi ka koobantahay? Waxay ila tahay waa musharrixii ku sifooba sifooyinka hoggaanka suuban lagu garto. Tilmaamahaan waxaa ka mid ah amaano khibrad iyo karti. Waana tilmaamihii Nebi Yusuf iyo Nebi Muuse (N.N.K.H.) lagu doortey markii masuuliyadda hogaanimo loogu dhiibayay.
Hadaba, qofkasta oo masuul ah oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada masuuliyaddana u haya ummada Puntland waxaa la gudboon in aysan damiirkooda iyo dadnimadooda ku iibsan xoogaa manaafacaad adduunyo ah. Waxaa la gudboon inay dareemaan codkoodu inuu ammaano iyo maragba yahay.
Ugu danbeyn waxaan Eebbe uga baryayaa masuuliyiinteena inuu ku sugo waddada toosan annagana naga dhigo kuwii addeeca una kaalmeeya.
WQ: Awil Mohamud N. Egal
PhD. candidate in Management and Organization
Anadolu Universtiy, Eskisehir, Turkey.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20799
Xildhibaanka dooran haddii uusan hore sharciga u ilaalin sidee buu berri u ilaalin doonaa? (akhriso)
Farmaajo ayaa laaluush ku soo baxay hadii musuqmaasuq laga hadlayo.
Dar daaran xildhibaan talo waa tii ilaah hadii aad u vote do kan
Baa u qayla badan hadaaye kuwaas
Kuwanaa ku xigay kanaa u dambeeya
Ee waa markaygii cadaalad ma aydaan samyeenin koleey ilaah midbuu keenayaa laakiin u guro
Dhanka saxa ah wadajir yaaney dhicin nagadaa kueaa o ooh kanaaba
Kadaran rag mutacalimiina baad
Tihiin take pen and pepar then
Taxliil samee hadii ay israacaan
2 3 qof xuntiisa bro kafiirso dòrashadiisa noolahaasi muxaafid iyo mucaarad midna hakategin
Dib u raac raadkiisii arooryaad
Waxaad helaysaa qofkii saxa ahaa
Dhalinyaro dadkani waa team waxa
Ay isugu xiranyihiin ninka u suxul duubaya meela qaarkood adeer kafiirso habur burin gurigaaga bal try in aad dhisto kan walaalkeen
Oo aan kuleeyahay haku milmin
Ka idiin macaato adinkiyo raga website yadani horboodaya M/sanidin.